Social Media ကိုဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားခဲ့လဲ။ | Martech Zone
စနေနေ့, သြဂုတ်လ 18, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
Shel ကတစ် ဦး နှင့်အတူအချို့သောတုံ့ပြန်မှုပေးစိတ်ဝင်စားပါလိမ့်မယ်ရှေးရှေးတောင်းသောအခါ လူမှုမီဒီယာအပေါ် SAP စစ်တမ်းငါအခွင့်အလမ်းကိုခုန်တက်ခြင်းနှင့်ချက်ချင်းသူ့ကိုရေးသားခဲ့သည်။ Shel ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သူသည်ကျွန်ုပ်၏တုန့်ပြန်ချက်များကိုကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင်တင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ဒါကအပိုင်း ၁ ပါ။
ပုံနှိပ်မီဒီယာတွင်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာအလုပ်လုပ်နေစဉ်အင်တာနက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်အာရုံစူးစိုက်လာသည်နှင့်၎င်းနှင့်အတူသတင်းစာလုပ်ငန်းမှကြော်ငြာများကိုငါကြည့်ခဲ့သည်။ အင်တာနက်ကိုကြားခံတစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုရန်၊ စျေးသိပ်မကြီးရန်၊ နည်းပညာသည်အတော်လေးရိုးရှင်းသည်။ ပုံနှိပ်မီဒီယာထဲမှာတောင်မှကိုယ့်အားသာချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေကိုအလတ်စားတစ်ခုစီရှိတယ်လို့အမြဲယုံကြည်တယ်။ တစ်ခါတစ်ရံသတင်းစာ မဟုတ်ခဲ့ ကြော်ငြာရန်အကြီးမြတ်ဆုံးနေရာ။
အင်တာနက်ရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကအဲဒါကိုခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်မြင်ခဲ့တယ်။ ငါကမယုံနိုင်လောက်အောင်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအဖြစ်မြင်ခဲ့တယ်။ ငါသင်္ဘောကိုခုန်ချခြင်းနှင့်အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းအပေါ်တာဝန်ခံသောကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်ကော်လိုရာဒို၊ ဒင်းဗားသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ငါပူဖောင်းစတငျသောအခါငါပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ငါ Indianapolis ကိုပြောင်းပြီးဒေသခံသတင်းစာမှာပါ ၀ င်ပြီးသူတို့ရဲ့တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုကို ဦး ဆောင်တယ်။ အချက်အလက်တွေကိုအသုံးပြုသူတွေကိုပိုကောင်းအောင်ပစ်မှတ်ထားတယ်၊ ဖောက်သည်တွေအတွက်တိုက်ရိုက်မေးလ်အစီအစဉ်ကိုတွန်းတယ်။
အီးမေးလ်စျေးကွက်လိုနည်းပညာတွေကိုသတင်းစာထဲမှာပါ ၀ င်နိုင်အောင်ငါအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့အင်တာနက်ကိုအကြောင်းအရာတွေပို့ဆောင်ဖို့၊ ကြော်ငြာတွေရောင်းဖို့ကြားခံအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ အင်တာနက်ဆိုတာဘာလဲ IT ဌာနရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်မှာရှိတယ်။ စီမံခန့်ခွဲမှုအသစ်ရောက်လာပြီး“ မင်းဘာလုပ်တာလဲ” လို့စမေးတော့သူတို့မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ထွက်နေရတာကိုငါသိတယ်။
သူငယ်ချင်းနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Darrin Grey မှတစ်ဆင့် Pat Coyle နှင့်ကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူတို့၏ကုမ္ပဏီနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ irectရာဝတီ။ Darrin သည်အရောင်းနှင့်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုတွင်ကျွမ်းကျင်သည်။ Pat သည်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ခြင်းတွင်ကျွမ်းကျင်ပြီးမာစတာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဒေတာနှင့်နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်သူတို့၏အလားအလာများနှင့်ဖောက်သည်များနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းပညာများကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ ဒါဟာအောင်မြင်ခဲ့တယ်၊ Darrin ကိုရောင်းလိုက်တယ်၊ Pat လမ်းပြတယ်၊ ငါဆောက်ခဲ့တယ်!
ဤကာလအတွင်း Pat နှင့်ကျွန်ုပ်သည် Social Media ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစတင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ရယ်စရာမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Shel ၏စာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခဲ့သည် (ကိုက်စားသည်), အဝတ်အချည်းစည်းစကားပြောဆိုမှုများ။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုတာဟာတွန်းအားပေးတဲ့နည်းပညာတစ်ခုမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်လာပါတယ်။
Pat သည် Indianapolis Colt သို့အချိန်ပြည့်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ Jim Irsay ဦး ဆောင်သည့် Colts ကသူတို့ဟာကြီးမြတ်ခြင်း၏အစကိုရောက်နေပြီဆိုတာကိုသိပြီးသူသည် Superbowl ကိုတွန်းအားပေးနေစဉ်အတွင်းသူသည်ပရိသတ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုယူရန်လိုအပ်ကြောင်းသိရန်မျှော်လင့်ချက်ရှိသည်ဟုယုံကြည်ခဲ့သည်။
ငါပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည် အတိအကျCMO ကိုတည်ထောင်သူနှင့် Service ၀ ံဂေလိတရားဟောပြောခြင်းတို့ကြောင့်အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး ဖြစ်သည် ခရစ် Baggott။ ခရစ်၏မက်ဆေ့ခ်ျသည်ခွင့်ပြုချက်အခြေခံသည့်အီးမေးလ်စျေးကွက်၏မယုံနိုင်လောက်အောင်တန်ဖိုးနှင့်မှန်ကန်သောလူများအားမှန်ကန်သောသတင်းစကားကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂ နှစ်တာကာလအတွင်းပက်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပြီးသူသည်အင်ဒီယာနာပိုလစ်ပိုစ်စာအုပ် Mashup ကိုသူညှိနှိုင်းပေးသောဒေသခံစာအုပ်ကလပ်နှင့်မကြာခဏတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးစာအုပ်လော။ အဝတ်အချည်းစည်းစကားပြောဆိုမှုများ ဒါပေါ့!
Super Colow Champions အတွက်လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန် Colts ကို Pat ကအခွင့်အရေးပေးခဲ့သည်။ MyColts.net သည်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်ကြည့်မြင်သောအခါ \_ t ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အလုပ်များသောအချိန်ဇယား၊ ExactTarget အတွက် Developer Community ကိုစတင်ခြင်းနှင့်ရာပေါင်းများစွာသောပေါင်းစည်းထားသောဖောက်သည်များမှထောင်ပေါင်းများစွာအထိကြီးထွားလာစဉ် ExactTarget အတွက်ကုန်ပစ္စည်းမန်နေဂျာရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းခံရသည်နှင့်အမျှ MyColts.net စတင်သောအခါငါစောင့်ကြည့်နိုင်သည်။
Chris Baggott နဲ့ကျွန်တော်လည်းတွေ့ဆုံခြင်းနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ခရစ်သည်နားလည်သဘောပေါက်မှု၏တန်ဖိုးကိုနားလည်သဘောပေါက်သည်။ (ကျွန်တော်ယုံကြည်သည်) သည် ExactTarget ကိုစက်မှုလုပ်ငန်း၏ရှေ့တန်းမှမောင်းနှင်ရာတွင်အဓိကသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ ခရစ် ' အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ဘလော့ဂ်အီးမေးလ်ပို့ပါ နှစ်ပေါင်းများစွာအကြိမ်ပေါင်းများစွာချီးမြှင့်ခံခဲ့ရပြီးသူသည်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနယ်ပယ်တွင်အတွေးအခေါ်ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ခရစ်သော်လည်းအခွင့်အလမ်းကိုစတင်မြင်သောအခါ။ ဘလော့ဂ်များသည်သတင်းအချက်အလက်အတွက်အလွန်ကောင်းသည်။ သို့သော်ဘလော့ဂါများတင်နေသောရွှေတုံးကိုစားသုံးသူအနေဖြင့်ရှာရန်မလွယ်ကူပါ။
ခရစ်သည်အစေ့များကိုကြဲခြင်းဖြစ်သည် Compendium Software ကို, သူ့အသစ်က startup ။ ဤကုမ္ပဏီကိုမျက်ခြည်မပြတ်ပါစေနှင့်။ ၎င်းသည်နောက်လာမည့်ဘလော့ဂ်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်လက်တွေ့ဖြစ်လာသည်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာအဖေ့ရဲ့ကလေးကကြီးပြင်းလာတာကိုစောင့်ကြည့်နေသလိုခံစားရတယ်၊ ဒီကုမ္ပဏီစတည်ထောင်တာကိုမြင်ရတော့စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းတာကကျွန်တော့်အဖွဲ့ထဲဝင်ဖို့အချိန်ကောင်းကမရှိခဲ့ဘူး။
ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်ကစားကွင်းအဆင့်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ အဲဒါဟာဒီမိုကရေစီအတွက်သာမကစီးပွားရေးအတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ လူမှုမီဒီယာသည်မည်သူမဆိုအသံတစ်ခုရရှိရန်ကီးဘုတ်နှင့်အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ကိုပေးသည်။ Social media သည်ရိုးသားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား၎င်းတို့၏အလားအလာများနှင့်ဖောက်သည်များနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုပေးသည်။ အနိုင်ရသူသည် 'ကြော်ငြာအများဆုံးကိုတတ်နိုင်သူ' မဟုတ်တော့ပါ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်၎င်းတို့၏ဘတ်ဂျက်အမြောက်အများကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်အတွက်ရှာဖွေရန်မလိုတော့ပါ။ ယခုသူတို့သည်အလွန်ကြီးစွာသောအလုပ်ကိုလုပ်ရတော့မည် ဖြစ်၍ ထိုစကားလုံးသည်ထွက်သွားတော့မည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက် Indianapolis Star သည်အလင်းကိုစတင်မြင်တွေ့ရတော့သည်။ အယ်ဒီတာအဖွဲ့ ၀ န်ထမ်းများကပြောင်လှောင်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ သုံးစွဲသူထုတ်လုပ်သောအကြောင်းအရာသည်သတင်းစာအတွက်တိုးတက်မှုနယ်ပယ်ဖြစ်လာသည်။ ထွက်ခွာသည် မင်္ဂလာပါ အကောင်းဆုံးဥပမာအဖြစ်။
Tags: douglas karrမင်္ဂလာပါindianapolis coltအဝတ်အချည်းစည်းပြောဆိုမှုများIsraelသရေလအမျိုး၊လူမှုမီဒီယာ
သြဂုတ်လ 18 ရက် 2007 ခုနှစ် 9:27 နာရီ
ကောင်းသောဆောင်းပါး၊ Doug။ ကျွန်တော်လည်း ပုံနှိပ်လောကကနေ လာတာပါ။ CompuWriter Jr မှာ စာရိုက်ဖို့ သင်ယူရင်း သွားတွေကို ဖြတ်လိုက်တယ်။ အဲဒီအရာမှာ စက်အတွင်းက ဘီးပေါ်မှာ ဖောင့်ရိုက်နှိပ်ထားတဲ့ ဖလင်ရှည်တစ်ချောင်းပါရှိတယ်။ စာကိုရိုက်ပြီးတာနဲ့ ပြန်ပြင်ပြီး ပြင်လို့မရတော့ဘူး။ လိုင်းကို ပြန်ရိုက်ပြီး အမှားကို လက်နဲ့ ချွတ်ရပါမယ်။
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး “အော်တို-မှော်ပညာ” ဖြစ်လာစေသော နည်းပညာများ ပါ၀င်လာသောကြောင့် ကျွန်ုပ် လွင့်ပါးသွားခဲ့သည်။ ကွန်ပျူတာနှင့် ပရင်တာဖြင့်၊ စာမျက်နှာကို မပုံနှိပ်မီ type-o ပြုပြင်ခြင်းအပါအဝင် အဆုံးမရှိဖြစ်နိုင်ခြေများအထိ ကမ္ဘာကြီးကို ဖွင့်ပေးခဲ့သည်။
နောက်တော့ အင်တာနက် ပေါ်လာတော့ လူတွေက အရင်ကလို အချင်းချင်း ဆက်သွယ်လာတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အရည်အချင်းနှင့် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး၏ နက်နဲမှုနှင့် ကျယ်ပြောမှုကြောင့် အမြဲတအံ့တသြဖြစ်မိပါသည်။ crackpots တွေလည်းရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် စကားဝိုင်းမှာပါဝင်ခွင့်ကို ကျွန်တော်ကာကွယ်ပါတယ်။ စစ်မှန်တဲ့ တော်လှန်ရေးကာလမှာ အသက်ရှင်ရတာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်။
သြဂုတ်လ 18 ရက် 2007 ခုနှစ် 9:51 နာရီ
အရမ်းမိုက်တယ်။ မင်း ပုံနှိပ်တိုက်က လာတာလည်း ငါ မသိလိုက်ဘူး။ ကျွန်တော့်မှာ လျှပ်စစ်/အီလက်ထရွန်းနစ် နောက်ခံရှိပြီး လုပ်ငန်းရဲ့ pagination ဘက်ခြမ်းမှာ အတော်လေး အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက် မင်းဘယ်ကလာလဲဆိုတာ ငါသိတယ်။ ညှပ်ပြီး paste စာမျက်နှာတည်ဆောက်မှုများမှ pagination နှင့် အလိုအလျောက်စနစ်စတင်သောအခါတွင် ကျွန်တော်ရှိနေပါသည်။
သင့်လုပ်ငန်းသည် ဆွဲဆောင်မှုရှိသောစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး နည်းပညာအတွက် အဓိကအခြေခံသော လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်လီလက်လီရောင်းချမှုသည် လက်လီရောင်းချမှု၏အနာဂတ်ဖြစ်ပြီး ယနေ့ခေတ်တွင် အားကောင်းနေသော်လည်း “စူပါစတိုး” သည် နောက်ထပ်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအထိ ကြာရှည်လိမ့်မည်မထင်ပါ။
မင်းလူတွေက နည်းပညာကို အသုံးချနေပုံပဲ။ တောရိုင်းငှက်များ Unlimited အရမ်းကောင်းတယ်။ မင်းရဲ့ franchisees တွေက မင်းကိုရှိဖို့ကံကောင်းသူတွေပါ။
သြဂုတ် 19, 2007 မှာ 4: 38 AM
ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ပို့စ်။ ကျွန်ုပ်သည် Sun Microsystems မှဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်၏ CEO သည်လည်း ဆိုရှယ်မီဒီယာအတွေးအခေါ်ကို အားပေးပါသည်။ Chris Anderson's Long Tail အကြောင်းရေးခဲ့တယ်။
သြဂုတ် 19, 2007 မှာ 7: 42 AM
နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ လုပ်တဲ့အခါ ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ် 'မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ပါ' နှင့် ကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ ကျွန်ုပ်ဖော်ပြသော ပထမဆုံးကုမ္ပဏီမှာ Sun နှင့် Jonathon Schwartz ဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကို အရင်တုန်းက ဖတ်ဖူးတယ်။ သင်သည် ကောင်းမွန်သောအလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်နေပြီး နည်းပညာများ တိုးတက်ပြောင်းလဲနေပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝများကို ပြောင်းလဲပုံနှင့်ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော ရှုထောင့်တစ်ခုရှိသည်။
သြဂုတ်လ 19 ရက် 2007 ခုနှစ် 10:42 နာရီ
ဘယ်သူလဲ၊ Shel ဆိုတာဘာလဲ။
သြဂုတ် 20, 2007 မှာ 7: 35 AM
Shel သည် Shel Israel ဖြစ်ပြီး Naked Conversations ၏ စာရေးဆရာဖြစ်သည် - ကျွန်ုပ် အထူးအကြံပြုလိုသည့် စာအုပ်ဖြစ်သည်။ Shel မှာ အရမ်းကောင်းတယ်။ ဘလော့ဂ် ဆိုရှယ်မီဒီယာကို ဆက်လက်လေ့လာပြီး ဆွေးနွေးသည်။
ပြီးတော့ သူက တကယ်ကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကောင်ပါ။ သူသည် မယုံနိုင်လောက်အောင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ ရိုးသားပြီး သူ့ဆိုက်မှတစ်ဆင့် ရရှိနိုင်သည်။ သူသည် blogosphere ကို အသုံးပြု၍ သူ၏ လက်ရာကို အမှန်တကယ် အသုံးချနိုင်သော ပထမဆုံး စာရေးဆရာများထဲမှ တစ်ဦး ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။
28:2007 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 9, 34 တွင်
ဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုဒ်များသည် ကြော်ငြာခြင်း၏အသစ်အဆန်းဖြစ်မည်ဟု ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါသည်။ နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ အင်တာနက်က ဘယ်လိုပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော့်အတွက် အံ့သြစရာကောင်းပြီး အနာဂတ်မှာ ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုပဲ တွေးတောနေမိပါတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာဝဘ်ဆိုဒ်များကို အသုံးမပြုသော ကွန်ရက်စျေးကွက်ရှာဖွေသူတိုင်းသည် လုပ်ငန်းတိုးလာရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းကောင်းကို ဆုံးရှုံးနေပါသည်။
2:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 51
ဒါဆို ဖောက်သည် အပြန်အလှန် ဆက်ဆံမှုက ဆိုရှယ်မီဒီယာက အရမ်းအရေးကြီးတယ်လို့ ပြောနေတာလား။ ဘလော့ဂ်များသည် တူညီသောအခွင့်အရေးရှိပါသလား သို့မဟုတ် စာရေးသူကို ပရိသတ်ထက် ပိုမြင့်သော လေယာဉ်ပေါ်တွင် တင်ထားသည်ဟု ထင်ပါသလား။
2:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 42
ဘလော့ဂ်တစ်ခုတွင် တန်ဖိုးနှင့် အခွင့်အာဏာ တည်ဆောက်နိုင်မှု... ထို့နောက် ၎င်းကို မျှဝေပြီး ဆိုရှယ်မီဒီယာမှတစ်ဆင့် မြှင့်တင်ခြင်းသည် ကောင်းမွန်သောပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာသည် သင့်အား ပရိတ်သတ်များနှင့် စကားပြောဆိုရန် သို့မဟုတ် သင့်ကိုယ်ပိုင်အသိုင်းအဝိုင်းကို တည်ဆောက်နိုင်စေသည့် လမ်းကြောင်းနှစ်သွယ်ဖြစ်သည်။ တခြားသူမရှိရင် ဒီလောက်တောင် အစွမ်းထက်မယ်လို့တော့ မသိဘူး။